Lahaystayaal faransiis ah oo lagu siidayay wadanka Yemen – SBC
Lahaystayaal faransiis ah oo lagu siidayay wadanka Yemen
Posted by Webmaster on November 14, 2011 Comments
Wararka ka imaannaya wadanka Yemen ayaa ku waramaya in xoriyadooda la siiyay sadex lahayte oo u dhashay wadanka faransiiska kuwaasi oo u shaqeynayay hayad dhinaca gargaarka biniaadanimada ka shaqeeya sida ay warbaahinta u sheegeen masuuliyiinta dowlada Faransiiska.
Lahaystayaasha oo ahaa laba haween ah iyo nin ayaa ahaa shaqaale u shaqeynayay hayad dhinaca gargaarka dadka dhibaateysan ka shaqeyneysay wadankaasi yamen.
Kooxda afuudbatay oo aan weli la shaacin sida ay u siidayeen ayaa waxaa soo baxaya warar sheegay in kooxdan afduubka u haystay muwaadiniinta faransiiska ah ay ku haysteen Magaalada SEYUN oo 600 Bariga kaga beegancaasimada sanca ee dalka Yemen welina dowlada Yemen kama hadlin warka siideynta.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa Boqorka dalka Cumaan uga mahadceliyay kaalinta uu ka qaatay siideynta Muwaadiniinta Faransiiska ah ee muddada lagu haystay Wadankaasi Yemen.
Warka ka soo baxay Xafiiska Madaxweynahaa ayaa lagu xusay in dowlada Frnce ay si diiran u soo dhaweyneyso Siideynta Muwaadinin u dhashay dalkeda oo iyaga oo nool laga soo siidayay Kooxo ay u qafaalnaayeen waxaana dowlada ay markale uga mahadcelisay Boqorka Dalka Cumaan.
Si dhameytiran looma shaacin sida ay ku timid siideynta kooxxdan waxaana dowlada faransiiska iyo dowlada yemen oo ay dalkeeda ku qafaalnaayeen ay ku gaabsadeen in la siidaayay dadkan
Bishii September ee sannadkan ayay ahayd markii kooxdan sadexda ah ee la siidayay ay ka soo muuqdeen Vedio la soo geliyay bar internet kaasi oo lagu sheegay in kooxda qafaalatay aysan weli helin dalabkooda ku aadan siideynta.
Dalka Yemen in ka badan 200 oo dad ajanabi ah ayaa lagu afduubtay 15-kii sanno ee la soo dhaafay waxaana intooda badan la siidayay iyaga oo badqaba